चीन मध्यवर्ती रंग निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु - पूर्वी आर्गन रासायनिक
घर > उत्पादनहरु > पानी आधारित रंग > मध्यवर्ती रंग
मध्यवर्ती रंग निर्माताहरु
मध्यवर्ती रंग एक बाक्लो फिल्म बनाउने सामग्री एक बहुलक संश्लेषित एक्रिलिक पायस बाट बनेको छ, pigments, fillers र additives संग जोडियो। यो न केवल पर्खाल को रक्षा को लागी साधारण रंग को समारोह छ, तर यो पनि आधार सतह मा दरारहरु लाई कभर गर्न सक्छ। तीन आयामी ढाँचा।
मध्यवर्ती रंग एक लि paint्क रंग, जो आसंजन र प्राइमर र शीर्ष कोट को बीच बल बल सुधार गर्न सक्नुहुन्छ को रूप मा प्रयोग गरीन्छ। रंग फिल्म को मोटाई बढाउनुहोस्, रंग कोटिंग को स्थायित्व सुधार, र सेवा जीवन विस्तार। सतह रंग फिल्म मोटा, उज्यालो र चिल्लो बनाउन, र सतह सजावट विशेषताहरु लाई सुधार गर्नुहोस्। एकै समयमा, मध्यवर्ती रंग उत्कृष्ट मौसम प्रतिरोध, दरार प्रतिरोध र प्रभाव प्रतिरोध छ, चरम मौसम परिवर्तन र हावा मोल्ड क्षरण सामना गर्न सक्छ, र हरियो, पर्यावरण मैत्री, बलियो र टिकाऊ छ।
मध्यवर्ती रंग घरहरु, सरकारी भवनहरु, होटलहरु, कार्यालय भवनहरु, स्कूलहरु, आदि को रूप मा ठूला भवनहरु को नयाँ निर्माण को लागी उपयुक्त छ यो पर्खाल को उचाई र भित्ता को जटिल आकार द्वारा प्रतिबन्धित छैन। यो व्यापक रूप बाट सजावट र कंक्रीट र सिमेन्ट बाहिरी पर्खालहरु को सुरक्षा को लागी प्रयोग गरीन्छ।
चीन मा एक पेशेवर मध्यवर्ती रंग निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु को रूप मा, ईस्ट आर्गन केमिकल अनुकूलित को निर्माण को समर्थन गर्दछ मध्यवर्ती रंग। एकै समयमा, सबै उत्पादनहरु फैशनेबल, उन्नत, टिकाऊ र उत्तम दर्जेको, र CE प्रमाणीकरण छन्। हाम्रा उत्पादनहरु को उच्च गुणस्तर आंशिक रूपमा छ किनकि हामी हाम्रो आफ्नै कारखाना छ र आंशिक रूपले हामी अनुभवी र कुशल कामदारहरु छ। के तपाइँ थोक मध्यवर्ती रंग लाई समर्थन गर्नुहुन्छ? निस्सन्देह, यदि तपाइँ थोक, हामी तपाइँलाई सस्तो मूल्य, छुट र उद्धरण प्रदान गर्न सक्छौं। यसको अतिरिक्त, यो छुट उत्पादनहरु किन्न ठीक छ। यदि तपाइँ हामी संग सहयोग गर्न र उत्पादन किन्न चाहानुहुन्छ, हामी यसलाई कम मूल्य मा बेच्न सक्छौं। जस्तै भनिएको छ: सहयोग एक जीत-जीत हासिल गर्न! हामी तपाइँ संग सहयोग र एकसाथ साझा विकास साकार गर्न को लागी तत्पर छौं।